ULALELE UBUNTOMBI – Contos de Sacanagem
← وداعا العذرية
GOODBYE VIRGINITY →
Igama lami nginguBeatriz, ngineminyaka engu-22 ubudala. Ngingu-1, 70 ubude, nginsundu ngokukhanyayo, nginezinwele ezimfushane ezinsontekile ezisontekile, amehlo anombala ofanayo nowezinwele zami. Ngikhuluphele kancane, anginalutho oluningi, kodwa nginamabele amaphakathi naphakathi, imbongolo enkulu engayithola ku-Mama, okhalweni olubanzi nangokhalo oluncane. Futhi ngilapha ukukutshela ukuthi ngilahlekelwe kanjani yizinwele zami ezincane.
Yebo, ngangineminyaka engu-18 ngenkathi kwenzeka, kwakungahlukile kakhulu kunamanje, nganginezinwele ezinkulu nje futhi ngangizacile.
Nginodadewethu omdala kunami ngeminyaka emine, ngaleso sikhathi wayeneminyaka engu-27 futhi wayethandana nomfana oneminyaka engama-32 ubudala, uRafael. Udadewethu akahlukile kakhulu kunami, siyafana kakhulu, kuphela yena mncane kakhulu, walandela umndeni kababa futhi akazange azuze ifa elifana nelami. Futhi ngangihlala ngicabanga ukuthi akahambisani noRafael.
URafael wayeyindoda ebukekayo. UBrunette onezinwele ezimnyama namehlo amnyama, mude kunami, kufanele abe cishe u-1. 78, azungeze. Wayenomzimba ochazwe kahle kakhulu, hhayi imisipha eyeqisayo, eyayimfanela kahle kakhulu futhi imenza abukeke eyindoda ngokumangalisayo, futhi wayenevolumu ezimfishane zakhe ezangenza ngaba nelukuluku kakhulu.
Angidingi ngisho ukusho ukuthi kwakunguRafael kuphela owayekhombisa ukuthi ngibe manzi, akunjalo? Kepha uRafael akakaze anakekele, wayehlala engiphatha njengodadewabo omncane wentombi yakhe, njengengane. Futhi angikaze ngicabange ukuthi kukhona okungenzeka phakathi kwethu, empeleni, wayethandana nodadewethu futhi angizange ngibe neso elikhulu.
Ngaleso sikhathi nami ngangiyisilima kakhulu, ngangingakaze ngiqabule ngaphambili. Nganginamahloni okukhombisa umzimba wami futhi angizange ngigqoke izingubo ezimfishane kakhulu noma eziqinile. Ngangingenabo abangane abaningi, ngakho ngangihlale ngisekhaya. Ngangimelene kakhulu nomphakathi.
Ekupheleni konyaka iholide uRafael wacela udadewethu ukuba ahambe naye baye e-Angra dos Reis, umama ekuqaleni wayengafuni ukuhamba, empeleni, bathandana isikhathi esingaphansi konyaka futhi umama wayengamazi kahle futhi esaba. Kepha udadewethu waphikelela futhi uMama washiya enombandela owodwa: ukuthi bahambe nami, ukuze sikwazi ukunakekelana. Udadewethu wayengayithandi kakhulu, kodwa wayejabule.
Sihlele konke ukuhamba, bengingajabule neze ngalo mbono, kodwa ngempelasonto konke sekumi ngomumo sahamba. Sihlale isikhathi eside emgwaqeni, uRafael wasithatha ngemoto yakhe, saze safika.
Indawo yayiyinhle. Le ndlu ibibukeka njengekhabethe kunendlu yasolwandle futhi ibiphambi kolwandle, esiqhingini esinamanzi acwebezelayo nesihlabathi esimhlophe, ibukeka njengepharadesi. Ngasikhathi sinye ngangijabula. Sahlala phansi, udadewethu wahlala egumbini elilodwa nami noRafael kwelinye igumbi, kodwa komakhelwane. Besikhathele kakhulu ngohambo ngakho-ke salala usuku lonke, ngaphandle kokujabulela ulwandle.
Zahamba izinsuku ngabona ukuthi njalo ebusuku udadewethu wayephuma ekamelweni aye egumbini lakhe. Wayelindele ukuthi ngilale, kepha njalo ngangivuswa imisindo, ukububula, okuvela egumbini elilandelayo. Futhi lokho kwangijabulisa, ngangihlala ngithinta futhi ngikujabulela ukucabanga ngomlamu wami ogebenga udadewethu.
Emini ngangihlala ngimbona ezihlokweni zasolwandle, edlala nodadewethu emanzini futhi lelo volumu leqhude lakhe elithambile lingenza ngaba nelukuluku futhi ngajabula. Ngangingakaze ngiyibone induku ephilayo nemibala, futhi njalo lapho ngibona umlamu wami wayevusa lesi sifiso sokubona. Ngangingakalusebenzisi ulwandle, ngangingazange ngithathe ibikini ngakho-ke ngavele ngahlala kuvulandi wendlu, ngilele emgodini, ngibuka yonke into, ngengubo elula kakhulu yokudambisa ukushisa, ngezikhathi ezithile ngangizifaka engozini yokuya olwandle ngisho nasezingutsheni zami noma nini izithandani ezijabulayo zaphuma ngangena nge-panties naku-bra, kwakuwulwandle oluvaliwe, kwakungekho bungozi bokuthi umuntu angibone.
Ngelinye ilanga, lapho udadewethu ephuma nesoka lakhe, ngathatha ithuba lokungena olwandle lwezingubo zangaphansi. Ngangigqoke iphenti elimhlophe, elalingelincane noma likhulu, kepha ngangihlala ngishaywa ngesibhakela embongolweni yami enkulu, nangebra elinombala ofanayo elingasalingani kahle emabeleni ami futhi lihlale liwashiya ngaphandle, kuthi ngemuva kokumanzi abe sobala ngokumelene nesikhumba sami, kukhombisa ngokusobala izingono nezingono zami kuze kube yileso sikhathi ngiyintombi futhi angathintwa.
Ngalahleka kwathi lapho ngisuka olwandle ngiya ekhaya, ngazithela kumlamu wami. Wangibuka, wangihlaziya ngendlela engangicabanga ukuthi ngihamba ze ngempela. Wangidla ngamehlo futhi ngawo lowo mzuzu ngabona ukuthi ivolumu yesikhindi sakhe yayiphezulu. Uphi uBianca? Bengicabanga ukuthi niphumile… – ngibuze, nginamahloni futhi nginamahloni ngenkathi ngizama ukufihla umzimba wami ngezandla.
Ugeza, wafika ejulukile, wafuna ukuvuselelwa athole ukuphumula, wangithuma ukuthi ngikubheke. – Uphendule, wangihlaziya. Wayengibuka ngokungenamahloni amabele ami nawo wonke umzimba wami, wangibuka kusuka ekhanda kuye ozwaneni engenamahloni futhi ngesinye isikhathi waqala ukuthinta iqhude lakhe elase lilukhuni kakade; ubushelelezi futhi wancinda ipipi lakhe phezu kwesikhindi sakhe ngokuqonda.
Ngamtshela ukuthi ngiyintombi nto noma okungenani ngazama ukukusho futhi ngabona ukuthi wayehlanya ukuzwa ngakho, ejabule ngokwengeziwe. Lapho ngibona ukuthi usevele wangincela amabele ami, wangimunca izingono ngamunye ngamunye kamnandi, kodwa elambile, ngokuhaha. Wakhotha, wancela, wangibamba, wangishiya nginesibazi ngokuphelele futhi ngibuhlungu, ngenkathi ngandisa ukubhucungwa kwakhe ehlumela lami. Ngangivele ngibubule kakhulu futhi ngigxavuna umzimba wakhe. Kuze kube yilapho ngizwa ukuqaqamba okukhulu emzimbeni wonke, ngabubula kakhulu ngenjabulo futhi ngafika ngilahlekelwa ukulinganisela emilenzeni yami futhi ngacishe ngawela phansi. Kwakuyi-orgasm engcono kakhulu empilweni yami.
Wangiqabula wonke umzimba wami kamnandi, ehlola intamo yami ngezindebe zakhe nomzimba wami ngezandla zakhe ezinkulu, eziqinile. Wakhama nembongolo yami kanzima, wangishaya ngempama ethi wayehlale engifuna nokuthi ngemuva kokungibona ebhishi waqala ukungifuna kakhulu, nokuthi wayehlanya ngezimbongolo zami. Wangikhama amabele, wadlala ngezingono zami ezazinzima. Ungisebenzisile ngenkathi ngilulama ku-orgasm. Ngezwa isandla sakhe sikimi wasibeka phezu kweqhude lakhe, elalingaphandle futhi likhomba ophahleni kanzima. Ngathuthumela lapho ngithinta futhi ngabheka leloqhude lilambe kakhulu, langibulala ilukuluku. Ngibambelele ngqi kuleloqhude eliqinile, elikhulu, elijiyile nelishisayo ezandleni zami. Iqhude lakhe lalilihle, nsundu ngekhanda elimpinki likhulu kakhulu kubukeka njengekhowe. Iqhude lakhe kufanele libe cishe nge-18 cm futhi lalimbozwe ngemithambo, lithambile, lifudumele, liyindoda. Ngokudabukisayo ngaqala ukumshaya indlwabu, ngangingazi ukuthi ngikwenze kanjani kodwa ngazama kanzima ukujabulisa umuntu engangimfuna kakhulu. Ngabona ukuthokozela kwakhe kwangaphambili kwehlela phezu kwekhanda lika-dick wakhe futhi ngachitha iminwe yami lapho ngisakaza i-gala yakhe phezu komzimba ka-dick wakhe, ngikushiya kuphelile.
Yebo, usibali … Uqhuba kahle kakhulu, kodwa woza lapha, woza … – Esho engiphulula ubuso futhi ephoqa ikhanda lami ukubhekisa iqhude lakhe phansi. Ngaguqa phambi kwakho ngabamba ingquza yakho. Ikhanda leqhude lakhe lagcwalisa wonke umlomo wami, ngalimunca, ngalimunca, ngalihlikihla ulimi lwami emthanjeni, ngaphunga ikhanda leqhude lakhe ngolimi lwami olushisayo nolumanzi. Wabubula, wahlokoma ngentokozo wangikhuthaza njalo ethi ngisebenza kahle, umlomo wami uyashisa futhi ngincela okumnandi. Ubambe ikhanda lami futhi waliphoqa ukuthi liqine kakhulu kwiqhude lakhe, kungenze ngigwinye iqhude lakhe ngangokunokwenzeka ngize ngikhamise lapho ikhanda lidonsa umphimbo wami.
Ngokushesha ngase ngithola ukulengiswa kwawo futhi ngawumunca kanzima, ngenza isikhathi esisheshayo futhi esihamba kancane. Wathatha isandla sami wasibeka emabhola akhe, ngaqonda ngaqala ukusikhama, ngikhama kahle. Ngizwe ipipi lakhe likhula futhi livuvukala emlonyeni wami, ligxumela ezindebeni zami ngezwa uketshezi olushisayo nolunosawoti luhlasela umlomo wami, ngenkathi umlamu wami ehewula ngokujabula, eza. Ngizamile ukukhafula i-cum yakho, kepha umlamu wami wangibamba ubuso, wangivala umlomo futhi wangenza ngagwinya ukunengeka.
Wangiyisa egumbini lakhe, wakhiya umnyango wangiphonsa embhedeni. Ukhumule iphenti nebra, wakhumula isikhindi sakhe sangaphansi kanye nengubo yangaphansi, waba nqunu phambi kwami. Ngahleka ngamahloni lapho ngibuka umzimba wakhe ophelele futhi omnandi. Ulule imilenze yami bese ewela engubeni yami, angimunce kube sengathi ulambile futhi ujahile, kodwa ngobumnene. Ulimi lwakhe lwaluvuselela ubulili bami kancane, ngobumnene nangobumnene, kodwa ngokuqinile.